Wasiirka Maaliyadda XFS oo qeyb-galay shirka sanadlaha ah ee Bankiga Horumarinta Islaamka – Walaal24 Newss
Wasiirka Maaliyadda XFS oo qeyb-galay shirka sanadlaha ah ee Bankiga Horumarinta Islaamka
April 4, 2019	18	By walaal24
Wasiirka Maaliyadda Xukuumaadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka qeyb-galay shirka sanadlaha ah ee Bankiga Horumarinta Islaamka uga socda magaaladda Marrakech ee dalka Morocco.
Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa wadahadallo la yeeshay Madaxweynaha, Madaxweyne ku-xigeenka Baanka Horumarinta Islaamka iyo wakiillo kale ee ka socday Bankiga Horumarinta Afrika iyo maalgashadayaal daneeya Soomaaliya.
“Maanta waxay ahayd maalin wax ku ool ah oo howlo badani ay nooga qabsomeen shirka sanadlaha ah ee Bankiga Horumarinta Islaamiga Waxaan wadahadallo yeelanay Madaxweynaha, M/weyne ku-xigeenka Baanka Horumarinta Islaamka & wakiillo kale ee ka socday hay’adaha muhiimka ah sida Bankiga Horumarinta Afrika iyo maalgashadayaal daneynaya Soomaaliya”ayuu yiri Wasiir Bayle.
“Horumarinta iyo dib-u-habeynta dhaqaalaha, dalkeena waxaa bogaadiyey oona tageero buuxda u muujiyey dhamaan hey’addaha caalamiga ah iyo bahwadaaagta Soomaaliya kala shaqeynta horumarinta, midaasna ayaana nagu dhiirigalineysa inaan sii wadno wadashaqeynta iyo iskaashiga ka dhaxeeya, dowladda, shacabkeeda iyo hey’addaha iyo wakiiladda caalamka, si aynu hore ugu sii dhaqaaqno meesha aynu joogno” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda XFS.
Ciidanka Xoogga Dalka oo gacanta ku dhigay Deegaanka Baladul Amiin iyo degaano kale
Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Warfaafinta XFS oo maanta Xilka lagu wareejiyay
Duqa Muqdisho oo Wareejiyey dhul xarun tababar oo casri ah Dawladda Turkigu uga dhisi doonto Ciidanka X.D.S.
Madaxweynaha cusub ee maamul Goboleedka Puntland Taariiq Nololeedkiisa
Madaxweynaha maamul Goboleedka K/Galbeed oo booqdey Xarunta Taliska Booliska ee Degmada Baydhabo
Ra’iisal wasaaraha Ethoipia iyo wafdi uu hogaaminay oo gaaray magaalada Doha ee Dalka Qatar
Wasiirkii ugu caansanaa Sacuudiga oo xilkiisa waayay, ka dib dilkii Jamaal Khaashuqji
Trump iyo Kim Jong Un oo lagu dhawaaqay kulan koodii labaad ee wadahadalka xiliga uu dhacayo
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay arimaha Garsoorka, shirkii Brussels, colaada Ceel Afweyn iyo Dorashada golayasha deganka
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo Hambalyo u diray dhamaan Muslimiinta gar ahaan Soomaliland Dal iyo Dibadba munaasabada Ciidul Adxa awadeed
Daawo: Afhayenka Boliska Somaliland iyo Taliye ku xigenka oo ka hadlay dil ka dhacay maglada Hargeysa iyo dad lagu soo qabtay muqadaraad
Daawo: Wasiir Beyle “Dheeraad nin doonayow dhaqankii xumaa adoo Haanta dhabaqsaday ama dhiilka heensaday dhag dhag iyo hadii sacabka lagu soo dhaweyn jiray dhaar baa ka taalo cidi dhicimayso adna teelo ha ii dhiga”
Daawo: Somaliland oo Digniin u dirtey shacabka Soomaliland kagana digeysa Duufaano ku soo socota siiba Xeebaleyda